अष्ट्रेलियाको एक व्यक्तिले एउटा ससेज र ब्रेडको ९ हजार डलर तिरे - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको एक व्यक्तिले एउटा ससेज र ब्रेडको ९ हजार डलर तिरे
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०४:३४ |
मेलबर्न । एउटा ससेज र ब्रेडको मूल्य कति पर्ला ? यसको उत्तर दिनुभन्दा अघि यसको मूल्य ९ हजार डलर तिर्नुपर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
सनबरी भिक्टोरिया अष्ट्रेलियाका एक व्यक्तिले एउटा ससेज र ब्रेडको मूल्य ९ हजार डलर तिरेका छन् । तर उनले राजीखुशीले नभई जरिवानास्वरुप यति धेरै रकम तिर्नुपरेको हो । उनको एउटा शौखको कारण यति ठूरो जरिवाना भएको हो । पेकिसका स्थानीय रहेका ती व्यक्तिले स्थानीय वेयरहाउसबाट ती ससेज र ब्रेड मगाएका थिए । तर त्यसका लागि उनले ड्रोन क्यामरा प्रयोग गरेका थिए ।
एउटा चिटमा ससेज र ब्रेडको अर्डर सहित १० डलर पठाएर उनले ड्रोनलाई वेयरहाउसमा पठाएका थिए । त्यहाँका कर्मचारीहरुले पनि उनको अर्डर अनुसारको ससेज र ब्रेड प्याक गरेर ड्रोनमा झुण्ड्याइदिएका थिए । त्यसपछि उक्त ड्रोन उड्दै निकै टाढा रहेको ती व्यक्तिसम्म ससेज र ब्रेड पुर्याउन सफल भएको भिडियोमा देखाइएको छ ।
तर यसलाई अष्ट्रेलियन नागरिक उड्डयन अधिकारीहरुले भने गम्भीर अपराध मानेको छ । हवाइ सुरक्षाको नियम उल्लंघन गरेको अभियोगमा अधिकारीहरुले ती व्यक्तिमाथि ९ हजार डलर जरिवाना लगाए ।
यो घट्नाबाट जतासुकै ड्रोन उडाउन पाइन्छ भन्ने मानसिकतालाई रोक्ने अधिकारीहरुको दाबी छ । हामी नागरिकहरु उनीहरुका ड्रोनसँग रमाऊन भन्ने चाहन्छौं । तर विद्यमान कानूनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । आफ्नो रमाइलोका लागि अरुमाथि खतरा निम्त्याउन् पाइदैन,एक अधिकारीले बताइए ।
Pic Source :7News
Previousभारतका सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह शुक्रबार काठमाडौँ आउने
Nextअष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा फिल्म पूरानो डुङ्गाको लगातार तीन शो
सिड्नीमा कवि नवराज कार्कीले दर्शकलाई हँसाउँदै भावुक बनाए
४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार ०५:२१
निगमका हाकिम नै ग्याँसको कालोबजारीमा
१४ चैत्र २०७२, आईतवार ०१:४७
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०२:४१